प्रचण्डको निर्णय मान्दैनौ भन्दै पेरिसडाँडामा यूवाहरु गर्जदै – YesKathmandu.com
पार्टी एकीकरण भएको चार महिना भयो । तर सबैभन्दा ठूलो भातृ संगठन वाइसियलको विवाद मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
पार्टी एकीकरणका बेला वाइसिएलको नेतृत्व रामबहादुर थापा पक्षधरले लिने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार थापा पक्षका नेपबहादुर कुँवरलाई अध्यक्ष बनाउने नेताहरुका बीचमा सहमति भयो । कुँवरको उमेर ४८ बर्ष भइसकेको र पार्टी तथा देशको युवा नीति अनुसार उनी युवा उमेरभित्र नपर्ने भन्दै तत्कालिन एकीकृत माओवादी पक्षको वाइसिएलले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
पचास वर्ष उमेर टेक्न लागेका व्यक्तिलाई यूवादस्ताको नेतृच्व सुम्पिन खोजिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टीभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरुले नीति विपरित अध्यक्ष तोकेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) मा असन्तुटि बढेको छ । नीति विपरित नेतृत्व तोकिए भन्दै तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध वाइसिएलको भिन्दै बैठक आज बस्दैछ । पेरिसडाँडामा बस्ने बैठकले संस्थागत रुपमै पार्टी नेतृत्वलाई निर्णय सच्चाउन अपिल गर्ने वाइसिएलका नेताहरुले बताएका छन् ।
बादल पक्षको भिन्नै भेला
यसअघि वाइसिएलले दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले कुनै एक जिम्मेवारीमात्र रोज्नुपर्ने, उमेर हदभन्दा माथिका स्वतः संगठनबाट बाहिरिनेलगायतका निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय र विधिका आधारमा ५०० को संख्यामा रहेको केन्द्रीय समिति १५१ मा ल्याइएको थियो । तत्कालिन नेकपा माआवादी पक्षको वाइसिएलले नेपबहादुरलाई नेता मान्न अस्विकार गरेपछि रामबहादुर थापा पक्ष वाइसिएल पनि बैठकको तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
स्ववियु निर्वाचनको मिति सर्यो
सिचाईंमन्त्री गिरीलाई हार्टअट्याक,नर्भिक अस्पतालमा भर्ना
वर्षायाममा पनि घटेन विद्युत्भार
बाढीपीडितका लागि माओवादी केन्द्रको ३५ लाख सहयोग
भूकम्पपीडतको ५० हजार रुपियाँसम्मको श्रृण मिनाहा गरिने
कसरी हरायो गिरिजाप्रसादको त्यो गोप्य सिमकार्ड ? चोर को सिटौला !
युवा संघको अध्यक्षमा रमेश पौडेल चयन, दिलु पन्त ब्याक
फर्सीलालको व्यग्य : तिजैको रहर आयो बुढीलाई,दाँतबाट पसिना आयो बूढालाई